सकियो नेकपाको हाइकमाण्ड बैठक, नेता कार्यकर्तालाई चकित पार्दै के-के भए निर्णय ? — Imandarmedia.com
सकियो नेकपाको हाइकमाण्ड बैठक, नेता कार्यकर्तालाई चकित पार्दै के-के भए निर्णय ?
काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को हाइकमाण्ड बैठक सकिएको छ । सभामुख चयन र मिलेनियम कर्पोरेशन च्यालेञ्ज (एमसीसी)बारे छलफल गर्न नेकपाले आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक बोलाएको थियो । तर, बैठक विषयमा अनिणिर्त हुँदै टुंगिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले आइतबार बिहान सचिवालय बैठक बसे पनि कुनै निर्णय नगरेको जानकारी दिए । यौ’न दु’र्व्य’व’हारको आरोपसँगै कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएपछि सभामुख पद रिक्त छ । उपसभामुखलाई राजीनामा गराएर नेकपाले सभामुखमा नयाँ अनुहार पठाउने योजना बनाएको छ । यद्यपि, नेकपाले अहिलेसम्म कसलाई सभामुख गराउने भनेर निर्णय लिन सकेको छैन ।
नेकपाले सभामुख चुन्न नसक्दा संसदको काम-कारबाही प्रभावित हुँदै आइरहेको छ । आइतबार पनि यसबारे नेकपाले निर्णय लिन नसकेकाले संसदको अन्योलता थप चुलिने देखिएको छ । एमसीसीमार्फत् प्राप्त हुने ५५ अर्ब अनुदान स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहस पनि नेकपाभित्र छ । अमेरिकाले यो सहयोग इण्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत भएको समाचार प्रकाशमा आएपछि नेकपाका लागि यो टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।
आइतबार सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकको दृश्य अरू बेलाभन्दा फरक देखियो। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सँगसँगै राखिएका दुई कुर्सीमा बसे।
कार्यकारी अध्यक्ष बनेको एक महिनापछि प्रचण्डको कुर्सी ओलीसँगै राखिएको हो। सचिवालय बैठकमा पहिले प्रचण्ड बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको छेउमा बस्थे। ‘दुबै अध्यक्षसँगै बसेर दुबै अध्यक्ष एकै हो भन्ने सन्देश दिन खोजिएको हो,’ प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भने।
मंसिर ५ गते बसेको सचिवालय बैठकले प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष हुने र ओली नेतृत्वमै पाँच वर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता हुँदा आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने लिखित सहमति भएको थियो। सचिवालय बैठकले दुबै अध्यक्षको कार्यविभाजन पनि प्रष्ट पारेको थियो। प्रचण्डको अध्यक्षतामा बस्ने सचिवालय बैठकका एजेन्डा अर्का अध्यक्ष ओलीसँग छलफल गरी तय गरिनु पर्ने उल्लेख छ। बरियतामा भने ओली प्रचण्डभन्दा अघि छन्।
कार्यकारी बनेपछि प्रचण्डले सचिवालय बैठक बोलाएका थिए। पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली उपस्थित भएका थिएनन्।